नव वर्ष वि.सं. २०७४ ज्योतिष विज्ञानको ऐनामा :-– ज्यो.पं. दीपक सुवेदी - Janapukar
प्रवास अमेरिका समाचार साहित्य भिडियो विचार हास्य टेलिचलचित्र सम्पर्क नव वर्ष वि.सं. २०७४ ज्योतिष विज्ञानको ऐनामा :-– ज्यो.पं. दीपक सुवेदी ज्यो.पं.वैद्यराज दीपक सुवेदी (डबल गोल्डमेडलिष्ट)
कमलमार्ग १७२, केसीटोल कमलपोखरी, काठमाडौं ९८४१२२३१२६, ९८०३८७९९७८, ०१४४३१७४७
ग्रहैव्र्याप्तमिदं सर्व त्रैलोक्यं स चराचरम् ।। विक्रम सम्वतको वैज्ञानिकता : यद्यपि केही वर्ष यता वि.सं.को बारेमा चर्चामा आएका विभिन्न तर्क आदिले आमजनमानसमा अनेक मानसिकताको विचार तथा चिन्तनको रोपण गरेको छ । जे जस्तो तर्क आदि आउने गरेपनि वास्तविकतामा विक्रम सम्वतको वर्षारम्भमा विशेष वैज्ञानिकता छ । जुन अरु सम्वतमा छैन । सूर्य ग्रहले वर्षभरीमा बाह्रराशिको परिक्रमा सिध्याएर पुनः शून्य अंशा (डिग्री)मा आउने बिन्दुबाट यो सम्वतको प्रारम्भ हुन्छ । अन्य सम्वतहरूमा यो खालको गणितीय मान्यताको सिद्धान्त छैन । गणितीय वैज्ञानिकतामा विक्रम सम्वत जस्तो पूर्ण सम्वत अरु पाईदैन । तसर्थ यो सम्वत प्रारम्भ हुँदा पर्ने लग्न र त्यसको फलको प्रभाव विशेषतः आमरुपमा पर्ने गर्छ । यस पटक नयाँ साल शुरु हुनलाग्दा अर्थात सूर्यले कुल ३६० डिग्रीको परिभ्रमण गरी पुनः शून्य डिग्रीमा आउँदा नेपालको स्टेण्डर्ड समय अनुसार चैत्र ३१ गते बिहीवार राति अर्थात बैशाख १ गते शुक्रवार बिहान ०४ः१०ः३० बजिरहेको हुन्छ । सोही क्षणबाट नववर्ष वि.सं. २०७४ आरम्भ हुन्छ । यो नयाँ वर्षले नेपाली भूमिमा स्पर्श गर्दा नेपाली आकाशको क्षितिजमा जनकपुरदेखि पूर्व मीन र सोभन्दा पश्चिम कुम्भ जगल्लग्न पर्न आउँछ । देशको राजधानी काठमाडौंमा कुम्भलग्नमा नयाँ वर्ष शुरु हुन्छ । ग्रह स्थिति : राम्रो पक्ष :
लग्नेश एकादश, एकादशबाट लग्नलाई पूर्ण दृष्टि, सप्तमेश सूर्य तृतीयभावमा उचो, स्वगृही तृतीयेश तथा दशमेष र पञ्चमेषको साथमा (भलै बुध अष्टमेष पनि हो) सँग सूर्य तृतीयस्थानमा रहनु तुलनात्मक रूपमा राम्रो । केतुसँग भएपनि लग्नस्थ चतुर्थेश एवं भाग्येश शुक्र केही राम्रो मान्न सकिन्छ । कमजोर पक्षः षष्ठेश चन्द्र दशम्मा त्यति राम्रो भएन । बुध पञ्चमेश अस्त । बुध, बृहस्पति र शनि बक्र । धनेश तथा लाभेश अष्टम् खासै राम्रो भएन । राजा अर्थात राष्ट्राध्यक्षकारक बुध ग्रह अस्त, कमजोर । मन्त्री गुरु । मन्त्री कारक बृहस्पति अष्टम्, त्यति राम्रो भएन । साधारण नामको संवत्सर, तथापि बैशाख ५ गतेबाटै विरोधिकृत संवत्सर, संवत्सर फलले पनि आपसी विरोधाभाषलाई संकेत गर्यो । जगल्लग्नमा शुक्र शनिको घरमा र नवांश कुण्डलीमा शुक्र मंगलको दृष्टि यौनजन्य व्याभिचार बढ्नसक्ने भयो । ग्रह फलको विवेचना : फलामसँग सम्बन्धित काम, कलकारखाना, औजार आदिको पक्षमा ग्रहको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । जन्मकालमा शनि ग्रह बलबान हुने र महादशा आदिमा पनि कारक ग्रहको पालो चल्नेहरूलाई यो वर्षमा यथोचित फाइदा हुनेछ । सैन्य एवं हातहतियारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई सफलता मिल्नेछ । बुद्धिमतापूर्वक अदृष्य अबरोधी तत्त्वलाई निराकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न जानेमा मात्रै फलफूल, खाद्यान्न–कृषि, सूचनासञ्चार, संगीत, कलाकारिता, गौ एवं अन्य पशुपँक्षि पालन, रेमिट्यान्स, वस्त्राभूषण, प्रमोदी सामाग्री, तरलपदार्थ, स्त्रीश्रृङ्गार, रत्न, उपकरण, मित्रता–जागरण आदि पक्षमा विकास गर्न सकिने छ । यी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले लाभ एवं उन्नति गर्नसक्ने छन् । अष्टमस्थ बृहस्पति, दशमस्थ षष्ठेश नीच चन्द्रमा, लग्नमा केतु र त्यसमाथि शनि एवं राहुको दृष्टि जसले मुख्यतः राज्य र राज्यको बागडोर समातेका अधिकारीहरूको आँत कमजोर पार्ने हुन्छ । जनस्तरमा पनि विभिन्न रोगहरूको संक्रमणले महामारी फैलिने तथा जनधनको हानी गराउने सम्भावना रहन्छ । साथै राज्य तथा समाजमा विभिन्न खालका विचलनका संकेतहरूदेखा पर्नेछन् । दुर्घटना, बाढीपहिरो, आगजनी आदि दैविक विपत्तिले पनि सताउने छन् । अतः सम्बन्धितहरू समयमै सावधान रहनु तथा आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नु एवं पूर्वतयारीमा रहनु उचित हुनेछ । जगल्लग्नमा परेको ग्रहस्थितिको विश्लेषण गर्दा देशको मुख्य निकायमा आसिनहरूमा अझैपनि दृढता आउन नसक्ने र विभिन्नखालका विचलन आउने सम्भावना देखिन्छ । ती विचलनले नेपाल र नेपालीलाई विचलित बनाउनसक्ने संकेत ग्रहस्थितिले देखाएको छ । राज्यमाथि आइलाग्ने शत्रुप्रभावलाई सम्बन्धितहरूले चिन्न नसक्दा ठूलो मुल्य चुकाउन पर्ने भय पनि त्यतिकै देखिएको छ । यौनजन्य व्याभिचार तथा यौन हिंसा बढ्नसक्ने भएकोले सोसम्बन्धमा सम्बन्धित पक्ष एवं राज्यले नै आवश्यक जनचेतना अभिबृद्धि गर्न जरुरी हुनेछ । कमिसनजन्य आय गर्नेहरूलाई बढी सहज हुनसक्ने छ । प्राविधिक क्षेत्रमा देशले केही अग्रता लिनसक्ने देखिएको छ । अन्य कुरामा उस्तै उस्तै फलको प्रत्याभूति भएपनि तुलनात्मक रुपमा जनकपुरदेखि पूर्वमा शिक्षा, व्यापार, बाह्य एवं आन्तरिक र धार्मिकलगायतका पर्यटन, युवा उद्यमशीलता, जलस्रोत तथा तरलपदार्थ, कृषि, जनजागरण आदिको बढी विकास हुने देखिन्छ । तर राहुको कारण जनस्वास्थ्यमा बढी रोगप्रकोप बढ्नसक्ने छ । विशेष गरी राहु, केतु, शनि र बृहस्पति ग्रहको संक्रमणदोष सम्बन्ध देखिएको छ । राज्याधिकारीदेखि लिएर आम नागरिकसम्म सम्बन्धितहरूले आआफ्नो स्थानमा तत्–जन्य समाधानका उपायहरूअवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । सरकारको प्रतिनिधित्त्व गर्नेहरूले कुरा र निर्णय ठूलो गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हुँदा लगानि डुब्नसक्ने खतरा देखिन्छ । आन्तरिक द्वन्द तथा अविश्वासले सरकारमा विचलन आउनेछ । ग्रह स्थितिले भइसकेका कतिपय निर्णयहरू उल्ट्याउने लक्षण देखाइरहेको छ । बृहस्पति अष्टम र सुखेश एवं भाग्येश शुक्र लग्नमा, शनि एवं राहुको दृष्टिमा केतुको प्रभावको बाबजुत केही अबरोध हुने भएपनि पराक्रमको पक्ष सकारात्मक रहने छ । जसले गर्दा भौतिक सक्रियता बढ्न जानेछ । सामान्यतया जनस्वास्थ्यमा समय समयमा अप्रत्यासित एवं आकस्मिक महामारीजन्य संक्रमणका समस्या देखिनसक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । उपर्युक्त फललाई नववर्ष २०७४ को जगल्लग्नको ग्रहपरिस्थितिले देखाएको हुनाले नागरिकहरू सावधानपूर्वक, धैर्यता एवं सहनशीलतालाई धारण गरी स्वधर्म तथा जिम्मेवारीमा लगनशील रहनु उपयुक्त हुनेछ । अनधिकृत रुपमा चल्ने होहल्ला, विभिन्न बहकाव आदिको पछाडि लाग्नुभन्दा सत्यतथ्य बुझेर समाजमा आपसी सद्भाव कायम राख्दै सामाजिक भावनाको विकास गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । यो वर्ष जनताले राज्यसत्ताका अगुवाहरूलाई सुपथ सिकाउन सक्नुपर्ने छ । अन्यथा राज्यका निकाय एवं तिनका अधिकारीहरू आआफै विद्वेषमा फस्नसक्ने छन् ।
तसर्थ नागरिकपक्षले नै आपसमा बलियो रहनपर्ने, बुद्धिमानिता अप्नाउनु पर्नेछ । सम्भावित अनिष्ट ग्रहको फललाई न्यूनिकरण गर्ने सामाजिक एवं धार्मिक तथा सांस्कृतिक कर्महरूलाई बढीभन्दा बढी प्रसय दिनु शुभकर, हितकर र लोककल्याणकर हुनेछ । मेष
नव वर्ष २०७४ को राशिफल :-
मेष÷Aries (चु.चे.चो.ला.लि.लु.ले.लो.अ.) - मेष राशि हुनेहरूको लागि यो वर्ष शुरुका चार महिनासम्म गुरु बृहस्पति र वर्षभरी भाग्येमा रहने शनि त्यस्तै श्रावण पछि सुःख तथा कर्ममा रहने राहु केतु प्रतिकूल रहनाले कामकार्य एवं व्यापार व्यवसाय आदिमा कठिनाई हुनसक्ने छ । साउन पछि आस्थामा विभिन्न खालको उचाड्चडाव हुने र विलम्बको बाबजुत बढी प्रयत्नले मात्रै धार्मिक एवं आध्यातिमक कार्यमा केही उपलब्धि लिन सकिने छ । घरपरिवारमा सम्पादन गर्न खोजिएको विवाह व्रतबन्धादि दानपूण्यप्रद माङ्गलिक शुभकर्ममा ढिलासुस्तिको महसूस हुनेछन् । व्यापारजन्य आय–आम्दानीको मात्रा बढ्नेछ । व्यापार–व्यवसाय तथा कृषिउद्यममा प्रयत्न अनुसारको उपलब्धि मिल्नेछ । केही उपाय अवलम्बन गरेमा राजनीति एवम् समाज सेवा र जागिर आदिमा पद–प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नसकिने छ । विवाहयोग्यलाई दाम्पत्यसम्बन्ध जोडिने, सन्तानाभिलाषिहरूलाई सन्तान प्राप्ति हुने, वैदेशिक यात्राको पर्खाइमा रहेकाहरूको ईच्छा पूर्ति हुने समय परेको छ । जग्गा जमिनको कारोबार आदिमा भने त्यति सकारात्मक भूमिका ग्रहले दिनसकिरहेको छैन । क्रमशः विद्यार्थीहरूको लागि विद्यार्जनमा देखिएको ढिलासुस्ति हटेर सहज हुनेछ । प्रवचक तथा वाचक आदि वाणीवृति हुनेहरू एवं संगीत कर्लाकर्मीहरूको लागि पनि यो वर्ष कृति स्थापित गर्न सकिने छ । केही अबरोधको बाबजुत अल्लिबढी मेहनत गर्नाले नयाँ पेशा–व्यवसाय तथा जागिर मिल्ने, पुरुषार्थ गर्न सकिने छ । मान्यजनको स्वास्थ्य, विशिष्ट सम्बन्ध आदिमा केही प्रतिकूलता सृजना हुनसक्ने भएकोले आवश्यक सावधानी एवं निवारणका उपाय अवलम्बन गर्नु जरुरी हुनेछ । असारपूर्व गुरु बृहस्पतिको प्रतिकूलताको लागि माँ बगलामुखी एवं कुलदेवताको । श्रावण महिना उपरान्त राहुकेतुको प्रतिकूलतालाई कम गर्न भैरवदेवको सेवा श्रद्धाभक्ति एवं स्तुति गर्नु फापप्रद हुनेछ । निम्न वर्गीय श्रमजिवीको पक्षमा सहयोगप्रद कार्य आदि गर्नाले पनि प्रतिकूलतालाई कम गर्न मद्दत हुनेछ । धर्म–अध्यात्मका क्षेत्र तथा सम्भावित पक्षमा आउने सन्देह र समस्यालाई समन गर्न आफ्नो कुलधर्म संस्कृति अनुसार सात्त्विक विधिले सम्बन्धित उपाय अवलम्बनको साथमा आदिशक्ति भगवती महामायाको श्रद्धाभक्ति तथा ध्यान गर्नु उत्तम हुनेछ । बृष
वृष÷ Taurus (इ.उ.ए.ओ.वा.वि.वु.वे.वो.) - वृष राशि हुनेहरूको लागि यो वर्ष आंशिक पक्षमामात्रै अनुकूल रहेको छ । वर्षको शुरुका तीन महिना राहु केतु र वर्ष भरी नै शनि ग्रह प्रतिकूल रहने छन् भने गुरुबृहस्पति साउनपछि क्रमशः प्रतिकूल हुने देखिन्छ । जसले गर्दा मिथ्याअपवाद, विश्वासघात र ‘आफू ताक्छ मुढो बन्चरो ताक्छ घुँडो’ भने जस्तो फल मिल्ने सम्भावना रहेको छ । तथापि बढी नै प्रयत्न गरेर वर्षका शुरुका तीन महिनामा अत्यावश्यक काम बनाउन सकिनेछ । भरकोसिस्ले विद्यार्थीहरूले पनि यो समयावधिको सदुपयोग गरी उपलब्धि लिनसकिने छ ।
जन्मकालमा सम्बन्धित ग्रह प्रतिकूल भई सन्तानदोष व्यहोर्न परिहेकाहरूको लागि आषाढ उपरान्त सावधानी अप्नाउन पर्ने देखिएको छ । विशेष गरी गर्भवतीहरूले बढी ध्यान पुर्याउन जरुरी हुनेछ । कसैकसैलाई सन्तानकष्ट हुन जानेछ । रोग–शोक र कुसंगतको खतराको पनि सम्भावना छ । प्रायजसो सबैलाई बढी संघर्ष र कम उपलब्धिको कारण मानसिक उद्दिग्नता तथा उदासिनता बढ्न गइ आस्थाको धरोहरमा ह्रास आउने एवं किंकर्तव्यविमूढताको मनोविज्ञानले प्रसय पाउनसक्ने देखिन्छ ।
यो वर्ष अनिष्ट फललाई न्यून गर्न हतोत्साही नभइ इष्टदेवको भक्ति तथा साधनालाई बढीभन्दा बढी बढाउनु र शनि, राहु–केतु एवं गुरुको प्रतिकूलतालाई शान्ति गर्न हनुमान–शनिमहाकाल वा महाकाली, भैरव–छिन्नमस्ता र विद्यार्थीले सरस्वती तथा सर्वसाधारण सबैले वगलामुखी मा“ एवम् कूलदेवताको श्रद्धाभक्ति, जपपाठ, स्तुति आदि व्रत अवलम्वन गर्नु हितकर हुने छ । आफ्नो औकात–हैसियत अर्थात स्थिति अनुसार कञ्जुस्याई एवं हेल्चेक्र्याई नगरी अन्तरआत्मादेखिनै श्रद्धापूर्वक ग्रहशान्तिको उपाय अवलम्बन गर्नाले धेरै हद्सम्म ग्रहको दुष्प्रभाव शान्ति भई शुभफल प्राप्त हुनेछ । मिथुन
मिथुन÷ Gemini (का.कि.कु.घ.ङ.छ.के.को.ह.) – मिथुन राशिको लागि यो वर्ष संघर्षकर रहनेछ । वर्षको शुरुमा बृहस्पति प्रतिकूल छन् र असारपछि राहु एवं केतु पनि । शनिश्चरको भूमिका पनि खासै सकारात्मक देखिँदैन । पेटमा रोग, चोटपटक आदिले स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता बढाउने देखिन्छ । दीर्घरोगीहरूले सावधानी अप्नाउनु पर्ने हुन्छ । घर–जग्गाको मामलामा पनि ग्रहगोचर अनुकूल परेको छैन । तथापि साउनदेखि क्रमशः गुरुको अनुकूलता आउने भएकोले विद्यार्थीहरूले अध्ययनमा प्रगति गर्न सकिनेछ । अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धितहरूको लागि पनि कामकार्य एवं व्यवसाय आदिमा सहजता बढ्नेछ भने केही महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरू बन्नेछन् । तर गुरुको अनुकूलता भएपनि राहु आदि ग्रहको बाधक भूमिका रहिरहने हुनाले धेरै सहज मानिहाल्न भने हुनेछैन ।
जन्मकालमा शनि, राहु आदि पापग्रह अकारक हुनेहरूको लागि दुर्घटना, दैविक विपत्ति तथा धनजनको क्षति, दाम्पत्य कष्ट एवं विवादप्रद देखिएको छ भने परिबन्द, यात्रामा कष्ट, चोरी, राज्यबाट भय–कष्ट, गलत संगत, स्वजनबाट विश्वासघात, फसिने–ठगिने, नहुनेकार्यमा मन जाने–आसक्ति बढ्ने, मिथ्या अपवाद, अपव्यय, समय टरेपछि पश्चाताप हुने जस्ता आदि सम्भावनालाई ग्रहगोचरले लक्षित गरिरहेको देखिन्छ । कपट सम्बन्धको फन्दा देखिएको हुनाले वैवाहिक कार्य गर्नपर्दा वा प्रेममा विशेषमा ख्याल पुर्याउन जरुरी देखिन्छ । यौनरोग, गर्भाशय, मलाशय, ठूलो आन्द्रा, पौरुष ग्रन्थी, मिर्गौला, संक्रामक रोग आदिको सम्भावनालाई नकार्न नसकिने हुनाले तत्सम्बन्धी विषयमा संयम र सजग हुनु जरुरी देखिन्छ । व्यापारिक व्यवसाय क्षेत्रमा अन्य पेशाको तुलनामा सामान्यलाभ देखिन्छ । लगानीका क्षेत्रमा असम्भव प्रस्ताव आउन सक्नेछ, जसलाई ग्रहण गर्नुले पश्चाताप तथा धोका हुनसक्ने छ । प्रतिकूल ग्रहको दुष्प्रभाव घटाउन भगवती स्तोत्र पाठ, भैरव–छिन्नमस्ताको दर्शन भक्ति, काग–कुकुर सेवा र ब्रह्मज्ञानी गुरुजनको आर्शिवाद लिने जस्ता उपाय अवलम्वन गर्नु हितकर हुनेछ । कर्कट
कर्कट÷ Cancer ( हि.हु.हे.हो.डा.डि.डु.डे.डो.) – कर्कट राशि हुनेहरूको लागि यो वर्ष मिश्रित फलकारक छ । राहु केतु प्रतिकूल स्थितिमा नै देखिएका छन् । अप्रत्यासित अबरोधहरूको सामना गर्न परिनै रहनेछ । तथापि शनिश्चरको अनुकूलताले संघर्ष एवं शत्रुप्रभावको बाबजुत सफलता मिल्ने छ । उपयुक्त उपाय अवलम्बन गरी अघि बढेमा राजनीति, समाजसेवा, प्रतिस्पर्धा आदिमा सफलता र वीजय प्राप्त हुनेछ । रोजगार–पदप्रतिष्ठा एवम् पदोन्नती प्राप्त हुनेछ, व्यापार–व्यवसायका क्षेत्रमा प्रगति हुने र लाभ प्राप्त गर्नसकिने छ । न्यायिक क्षेत्रमा विजय मिल्नेछ । वर्षको मध्यपूर्व विदेश यात्रा, विवाह, जागिर, पदोन्नती, व्यापार–व्यवसाय आदि आँटे ताकेका औकात अनुसारका कार्यमा सफलता मिल्नेछ । साउन उपरान्त बृहस्पति ग्रहको अनुकूल भूमिकामा क्रमशः ह्रास आउने हुनाले अध्ययनमा उन्माद बढ्ने तथा रुची कम हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ जसको उपयुक्त उपाय खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ । शिरशूल, ढाड–कम्मर, घुँडा–खुट्टा तथा हाडजोर्नी–नशा एवं ग्रन्थीसम्बन्धी समस्या हुनसक्ने गोचर परेको हुनाले स्वास्थ्य एवं आहार विहारमा ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ । दाम्पत्य–प्रेमकष्ट वा असमझदारी बढ्नसक्ने तथा अरु पनि समस्या आइपर्नसक्ने देखिएको छ । सोँच, होश र विवके पुर्याएर व्यवहार गर्नु पर्ला । यो राशि हुनेहरूले यो वर्ष ग्रहको दुष्प्रभाव न्यूनिकरण गर्न भैरव उपाशना र माँ बगलामुखीको भक्तिदर्शन तथा व्रतादि एवं विद्वान गुरुजनबाट आर्शिवाद मार्गदर्शन ग्रहण आदि राम्रो तरिकाले गर्नु शुभप्रद हुनेछ । ग्रहशान्तिका उपायहरू सात्विक पारामा आफ्नो कूलधर्म संस्कृति अनुसार पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । सिंह
सिंह ÷ Leo (म.मि.मु.मे.मो.ट.टि.टु.टे) – सिंह राशिका व्यक्तिलाई यो वर्ष तुलनात्मक रुपमा अनुकूल महसूस हुनेछ । आफ्नो व्यवहारमा भने ध्यान दिन जरुरी हुनेछ । मान्छेहरूको मुल्याङ्कनमा अल्लि कमजोरी फेला पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ । ज्ञानोन्माद्ले विद्यार्थीहरूलाई असर गर्ने भय छ । जन्मसमयमा शनि आदि ग्रह प्रतिकूल हुनेलाई पेटको विमार, चोटपटक–अपरेशनसम्मको समस्या नहोला भन्न सकिन्न । नीति–व्यवहार र सैद्धान्तिक पक्षमा विचलनको कारणले गर्दा सैद्धानितक प्रयोगको क्षेत्र जस्तै राजनीतिक कर्मीको लागि पार्टी भित्रै, दर्शनशास्त्री तथा विद्यार्थीलाई दर्शनको क्षेत्र, धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तित्त्वलाई सम्बन्धित क्षेत्र एवं पक्षबाट टिकाटिप्पणी, आलोचना तथा अपजश एवम् विरोध आइपर्ने सम्भावना छ । सन्तान (छोराबुहारी) लाई कष्ट हुने वा सन्तानसँग असमझदारी बढ्नसक्ने वा सन्तानबाट खर्च बढ्ने वा अपहेलित हुनपर्ने हुनसक्छ भने गर्भावस्थामा रहनु भएकाले विशेष ख्याल पु¥याउनु पर्नेछ । बोलीचाली तथा संभाषणको विरोध हुनसक्ने छ । रपनि वर्षलाई विगतको तुलनामा सकारात्मक लिनसकिने छ । साउन उपरान्त केतुग्रहको अनुकूलता बढ्न जाने छ । शत्रु मुकाविलामा सहज हुनेछ । सञ्चित धनको आकस्मिक खर्च गराउने तथा गएको पैसा नफर्किने हुनसक्ने छ । लुच्चा तथा किर्पणीसँगको व्यवहार हुनाले धनसम्पत्ति फस्नसक्ने पनि डर देखिन्छ । अध्ययनमा प्रतिकूलता देखिएकोले ज्ञानोन्माद नगरेकै राम्रो हुनेछ । कोही कोहीलाई तान्त्रिक आदि गुप्त विद्याको अभिलाषा बढ्ने, भूमिगत एवम् जासुसि कर्ममा उद्यत हुने बुद्धि पलाउने सम्भावना देखिन्छ । जसबाट बचेको राम्रो हुनेछ । पशुपालन, कृषिकर्मजन्य व्यवसाय, प्राविधिक क्षेत्रबाट भने फाइदा उठाउन सकिने छ । तत्त्वोन्मादको वाबजुत पनि धर्म–अध्यात्मको पक्षमा भने सफलता मिल्ने छ । यो वर्ष विद्यार्थीले विशेष र अन्य सबैले पनि शनिको, साथै राहुको दुष्प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न हनुमान चालिसा, भगवती स्तोत्र, भैरवस्तोत्र आदि पाठ, महाकालशनि, भैरवदेव, काली, छिन्नमस्ता अथवा आफ्नो कूलधर्म एवं संस्कृति अनुसार सम्बन्धित देवदेवीको सात्त्विक पूजापाठ, ध्यानधारणा, व्रत आदि उपाशना अवलम्वन गर्नु बुद्धिमानी हुने छ । कन्या
कन्या÷Virgo ( टो.प.पी.पु.ष.ण.ठ.पे.पो.) – कन्या राशि हुनेहरूको लागि यो वर्ष शुभको तुलनामा अल्लि बढी संघर्षकर रहनेछ । जन्मका लीन शनि ग्रह प्रतिकूल हुनेहरूको लागि अनुकूलताको तुलनामा संघर्ष बढी हुनेछ । चोटपटक–घाऊ खटिरा जन्य रोग, दैविक विपत्ति, व्यवहारिक, घरायसी एवम् पारिवारिक समस्याहरूले दुःख दिनसक्ने भएकोले हरप्रकारको सावधानी अप्नाउनु आवश्यक देखिन्छ । कूलमा रोगको प्रकोप, मान्यजन वियोगको सम्भावना तथा आफन्त, साथीभाई, छरछिमेकी, सहकर्मी आदिसँग असमझदारीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्ने छ । मुद्धामामिला पर्नसक्ने, घर–जग्गाको कार्यमा विश्वासघात–धोका हुने, फसिने तथा पछुतो हुने समय परेकोले सित्तिमिति कसैको भरोसा नगरेकै राम्रो हुनेछ । साउन पछि भने गोचर केही अनुकूल बन्ने भएकोले कामकार्यमा पनि शुभलक्षणहरू प्रतित हुन थाल्ने छन् । तथापि अढैया शनिको दुष्प्रभावको कारण सावधानि चाहीँ हुनै पर्नेछ । शत्रु बढे पनि शत्रुलाई पनि हानी हुनेछ । दानपूण्यको समय परेकोले घरमा विवाहव्रतबन्ध आदि माङ्गलिक कार्य हुनजाने छ । स्वास्थ्यमा खराबी आउने, खर्च बढ्ने जस्ता आकस्मिक प्रतिकूलताको बाबजुत पनि बुद्धिविवेक पुर्याएर चल्नेहरूको लागि धेरै राहतको अनुभूति हुनेछ ।
विद्यार्थी तथा शिक्षासँग सम्बन्धितले ज्ञानोन्माद् नगरी समयको सदुपयोग गरेको खण्डमा मात्रै शुभ परिणाम हात पार्न सकिएला । व्यापार–व्यवसायमा देखिएको मन्दि, समाजसेवा, राजनीति, जागिरमा आएको अपजश जन्य स्थिति, घरपरिवार–कूलमा देखिएको दुःखविमार, पशुचौपाया तथा घरजग्गा एवम् कृषि आदिमा देखिएको समस्यालाई न्यून गर्न हनुमान–शनिमहाकाल एवम् भैरवदेव र कूलदेवताको सात्त्विक तवरबाट स्तुति आराधना गर्नु मनासिव हुनेछ । तुला
तुला÷ Libra ( रा.री.रु.रे.रो.त.ति.तु.ते.) – तुला राशिको लागि यस वर्ष मध्यम अनुकूल रहेको छ । अवसरको सदुपयोग गरेमा राजनीति, समाजसेवा, व्यापार–व्यवसाय आदिमा सफलता हात पार्न सकिने छ । बृहस्पतिको अनुकूलता आइनसकेको भएपनि बृहस्पतिको नाममा आफ्नो औकात अनुसारको आत्म समर्पण गरेको खण्डमा नया“ र दीर्घकालिन कार्यको थालनीको लागि सो“चविचार तथा कार्ययोजना बन्ने, गुमेको मान प्रतिष्ठा फिर्ता गर्न सकिने, विग्रिएको सम्बन्ध एवम् कार्यहरूको पुनस्र्थापना तथा सुधार गर्न सकिने र अड्केर रहेका केही कार्यहरू पूर्ण हुनेछन् । न्यायिक क्षेत्र सबल रहनेछ । हात तथा छातिमा चोट वा रोग र दाजुभाईमा कष्ट वा वादविवादको सम्भावना छ । शुरुमा पेटमा समस्या देखिन सक्नेछ भने क्रमशः घरायसी किचलो, घरजग्गाको कारोबार आदिमा ढिलासुस्ति तथा फसिनसक्ने र जन्मकालमा राहु आदि ग्रह प्रतिकूल हुने तथा महादशामा पनि प्रतिकूल ग्रह चल्नेलाई दैविक विपत्ति आदि आइपर्न सक्नेछ । सन्ततीलाई संघर्षले सफलता दिलाउने, आम्दानी भएपनि सञ्चय गर्न कठिनाइ पर्ने छ भने मान्यजन कष्टादिको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । यो वर्ष अधिकांश समय प्रतिकूल रहने गुरु बृहस्पति र राहु तथा केतुको प्रतिकूलतालाई न्यूनिकरण गर्ने उपायहरू जस्तै विद्वानजनको आर्शिवाद एवं मार्गदर्शन ग्रहण गर्ने, गरीब दीनदुःखी बालबालिकालाई अध्ययनको पक्षमा सहयोग गर्ने, बगलामुखी, भैरवदेव, छिन्नमस्ता आदि देवदेवीको दर्शनभक्ति एवं इष्टदेवको साधनामा बृद्धि आदि गर्नाले सम्भावित अनिष्टमा कमि आई शुभजन्य फल पाउन मद्दत हुनेछ । कुकुरलाई खुवाउनु, असहाय क्षेत्रलाई सहयोग गर्नु जस्ता कार्यबाट पनि अनिष्ट ग्रहको दुष्प्रभावमा कमि ल्याउन सकिन्छ । बृश्चिक
वृश्चिक÷ Scorpio ( तो.ना.नि.नु.ने.नो.य.यी.यु.) – वृश्चिक राशिको लागि यो वर्षको धेरैजसो पाटो संघर्षकर नै देखिएको छ । राहु केतुको प्रतिकूलताको बाबुजुत शुरुका तीनचार महिना गुरु बृहस्पतिको अनुकूल गति रहनाले ठिक–ठिकै उपलब्धिहरू हुनेछन् । याज्ञिक अनुष्ठानजन्य धार्मिक एवं विवाह व्रतबन्धादि माङ्गलिक कार्यहरू संपादन गर्न सकिनेछ । अल्लि बढी जोड एवं प्रयत्न तथा सर्तले कर्मचारीलाई पदोन्नति मिल्नसक्ने छ । उपरान्त बृहस्पतिको अनुकूलता घट्ने र केतुको अनुकूलता बढ्ने छ । धार्मिक कर्म तीर्थव्रतादिमा केही अड्चन आइपर्नसक्ने छ । वर्षको मध्यतिरबाट खर्चको बाबजुत साहसी एवं पौरखी कर्ममा सफलता पाइने छ । विदेश यात्राको सोँचमा बसेकाहरूको लागि वर्ष उपयुक्त रहनसक्ने छ । वादविवाद, कामकार्यमा अबरोध, मानप्रतिष्ठामा आँच, सञ्चित धनको खर्च, स्वास्थ्यमा समस्या, अपखबर र परिबन्दनीय परिस्थिति जस्ता प्रतिकूलता थोरधेर पर्ने नै छ । ससाना कार्यले अल्मल्याउँदा ठूला काममा समय दिन नसकिने, अधिक परिश्रमले थोरै उपलब्धिमा चित्त बुझाउन पर्ने, खानपान विपरित हुने, विश्वासघाती संगतमा परिने आदि प्रतिकूलतासँग जुध्न पर्ने सम्भावना छन् । घर छाड्न पर्ने–टाढा जानपर्ने अथवा परिवर्तन गर्न पर्ने, भोगभङ्ग अथवा स्थानच्यूती, मुद्धामामिला जन्य स्थिति तथा पछि पश्चाताप हुने जस्तो पनि नपर्ला भन्न सकिन्न । मुग्लान पस्ने अथवा विदेशीने कार्यलाई गोचरले बल दिइरहेकोले विदेशको बाटो हेरिरहेकाहरूको लागि भलै उपरान्त संघर्ष रहेपनि वैदेशिक यात्रा हुनसक्ने छ । आत्तिनु वा हतारिनुले क्षतिलाई नै बढाउने हुनाले मानसिक उद्दिग्नता र निराशालाई हटाउन यथेष्ट धैर्यताको क्षमता बढाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । अनिष्ट एवम् तनावलाई समन गर्न सर्वसाधारण सबैले हनुमान तथा शनि महाकाल, भैरवदेव साथै वगलामुखीको र विद्यार्थीले विद्याकी देवी सरस्वतीको भक्ति–स्तुति तथा श्रद्धा आराधना गर्नु हितकर हुनेछ ।
धनु÷Sagittarius (ये.यो.भ.भि.भु.ध.फ.ढ.भे.) – धनु राशिको लागि यो वर्षको ग्रहगोचर विगतको तुलनामा केही पक्षमा सहज एवम् अनुकूल मान्न सकिएता पनि वर्षको शुरुमा आकस्मिक घटना–दुर्घटना तथा चोटपटक र स्वास्थ्य समस्या व्यहोर्न पर्नसक्छ । मुख्यतः मध्यसाढेसाति, साउन उपरान्त राहु केतु र शुरुका तीनचार महिन गुरु बृहस्पति सकारात्मक देखिँदैनन् । वादविवाद तथा यात्रामा विभिन्न खालका कष्ट तथा चोरी आदिको सामना गर्नपर्ने हुनसक्ने छ भने दाजुभाई वा मान्यजनको कष्टको सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ । गलत आश्वासनमा फस्ने, आफन्तबाटै विश्वासघात–धोका हुने सम्भावना पनि छ । आषाढ उपरान्त भने गोचर केही सुधार भएको देखिएको छ । धर्म–अध्यात्म, विवाह–व्रतबन्धादि माङ्गलिक कर्म, सन्तान सुख हुनेछ । संघर्षका बाबजुत केहीहद्सम्म परिश्रमको फल मिल्ने र केही अधुरा कार्यहरू पूरा हुने छन् । राजनीति तथा समाजसेवामा अन्तिममा समर्थन र जश मिल्ने छ । जागिरको खोजिमा रहेकाहरूको लागि पनि शनिको विशेष उपाय गरेको खण्डमा अनुकूलताको सम्भावना छ । केही पक्षमा क्षणिक अनुकूलता महसूस हुँदैमा हौंसीने र मात्तिने गर्न भने हुनेछैन । स्नायू तथा उदर रोगले सताइ नै रहनेछ, दीर्घरोगिहरूले ख्याल पु¥याइ नै रहनुपर्ला । धेरै नै प्रयत्नले मात्रै जागिरमा पदोन्नती हुनसक्ला । शत्रु प्रभाव रहेकै देखिन्छ । जन्मकालमा शनि आदि ग्रह अनुकूल रहनेहरूका लागि भने आकस्मिक लाभ एवम् पदप्रतिष्ठा मिल्ने छ । शनिस्तोत्रपाठ, शनिमहाकाल, हनुमान, भैरव तथा छिन्नमस्ता आदि शनि तथा राहु–केतुको शान्तिदायक देवदेवीहरूको उपाशना, श्रद्धाभक्ति एवम् व्रत गर्नु विशेष हितकर हुनेछ । आआफ्नो कूलधर्म संस्कृति अनुसार पनि सात्त्विक तवरबाट ग्रहशान्तिका सम्बन्धित उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । मकर
मकर÷ Capricorn ( भो.ज.जी.जु.जे.जो.ख.खि.खु.खे.खो.ग.गी.) – मकर राशिको लागि यो वर्ष मध्यम फल दिने खालको छ । साढेसाती शनि र राहुकेतुको दुष्प्रभावले उथलपुथलको स्थिति सृजना गर्ने देखिएको छ । वर्षको शुरुमा विद्यार्जन र धार्मिक कर्ममा सफलता मिल्नेछ । व्यवसाय एवं पेशागत कार्यमा सामान्य फलिफाप हुनेछ । साउन महिना उपरान्त ग्रह बढी प्रतिकूल बन्दै जाने हुनाले सावधानी अप्नाउनु पर्ने हुन्छ । जन्मकालमा शनि आदि ग्रह अकारक हुनेहरूलाई विशेष गरी मिथ्या अपवाद जनित अफवाहले चारित्रिक एवम् नैतिक सवालमा प्रश्नचिह्नसम्म लाग्नसक्ने छ । अनपेक्षित मुद्धामामिला–वादविवाद, अन्यौलता, विगतको कपटप्रेम एवम् गुमिसकेको विषयको यादगारले सताउने, आकस्मिक खर्च, धन–जन तथा भौतिक सम्पत्ति को क्षती, दैविक विपत्ति, कूल–परिवारमा रोग, घाऊखटिरा–चोटपटक, वायु विकार–उदररोग, स्नायू आदि साध्यासाध्य रोग विमारजन्य स्वास्थ्य समस्याहरू हुनसक्ने सम्भावनालाई खगोलीय ग्रहस्थितिले संकेत गरेका छन् । विना परश्रमको धन प्राप्तिको चेष्टा हुनसक्ने, त्यस्तै संगतमा परिने वा गर्न मनलाग्ने र पछि पर्दाफास हुने कैफियतयुक्त धन लिनसकिने पछि त्यसकै कारणले पछुताउन पर्ने हुनसक्ने छ । तर जन्मसमयमा शनि आदि सम्बन्धित ग्रह अनुकूल अर्थात कारक रहनेको लागि भने प्रतिकूल फल कम मिल्ने तथा राजमान एवं अधिकार प्राप्ति हुनेछ । लहै लहैमा नलाग्ने, संयम र धैर्यता गर्नु हितकर हुनेछ । संघर्षपूर्वक गर्नसकिने कार्यमा सफलता मिल्ने छ । श्रमिक वर्गसँगको सहकार्य, शारीरिक परिश्रम बढी गर्नुपर्ने तथा झट्ट हेर्दा सफासुग्घर नदेखिने र खासै ईज्जतिलो नमानिएको तर लोक सेवा हुने एवम् सदाचारी कार्यमा सफलता मिल्ने छ । त्याग एवम् ईश्वर प्रणिधानको भावनालाई प्रसय दिएर निस्काम कर्म गर्नु बुद्धिमानी एवम् सुखकर हुनेछ । विद्यार्थीले सरस्वती माताको, वैदेशिक यात्राको पर्खाइमा बसेकालगायत सर्वसाधारणले हनुमानवीर, शनिमहाकाल, वगलामुखी, कूलदेवता आदि देवदेवीको स्तुति गर्नु शान्तिप्रद हुनेछ । कुम्भ
कुम्भ ÷ Aquarius (गु.गे.गो.स.सी.सु.से.सो.द.) – कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि यो वर्ष समष्टिमा राम्रो छ । तथापि शुरुका तीन महिना त्यति अनुकूल देखिँदैन, केही सावधानी अप्नाउनु पर्नेछ । मान्यजनकष्ट, आफ्नै स्वास्थ्यमा पनि खराबी, सम्पादन गर्न खोेजेको कार्यमा रोकावट, आफन्तिहरूसँग मनमुटाव आदिको सामना गर्नपर्न सक्छ । साउन महिनाबाट भने क्रमशः स्थितिमा सुधार आउने देखिन्छ । समयको सदुपयोग गर्ने र नहौंसिने हो भने धेरै क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ । राजनीति र समाजसेवा तथा जागिरमा पदोन्नती–प्रगति हुने देखिन्छ । दाम्पत्य एवं प्रेमसम्बन्धमा आएका विचलन हटेर सुखमा बढोत्तरी हुनेछ । विवाहयोग्यका लागि दाम्पत्य सम्बन्ध जोडिने, जग्गाजमिन एवम् वाहनादिको प्राप्ति हुने, सम्मानित यात्रा हुने, शत्रु तथा विपक्षि उपर विजय प्राप्त हुनेछ ।
अवैध–कुधनको कुचेष्टा नगरे पनि राम्रै आय–आम्दानी गर्न सकिने छ । चोटपटक, घाऊखटिराले सताउन सक्नेछ । पिलो, ग्रन्थी सुजन आदिको समस्या हुनसक्ने कुरालाई भने नकार्न सकिन्न । त्यस्तै दिएको धन फिर्ता हुन पनि कठिन पर्ने हुनसक्ने छ । विद्यार्थीका लागि साउन महिनाबाट विशेष अनुकूलता बढ्नेछ बुद्धिको युक्ति (जुक्ति) लगाएर समय एवं अवसरको सदुपयोग गरेमा भइरहेको अध्ययन विघ्नता हटी सफलता प्राप्त हुनेछ । व्यापार–व्यवसायीका लागि विशेष प्रगतिकारक र कृषक–उद्यमी वर्गको लागि सुख एवम् लाभप्रद समय रहेको छ । स्वास्थ्यमा लगायत सम्भावित अनिष्टको निवाराणको लागि विशेष गरी वर्षको शुरुवात्का महिनाहरूमा भैरवदेव र माँ बगलामुखीको साथै विद्यार्थीले माँ सरस्वतीको स्तुतिध्यान एवम् श्रद्धाभक्ति एवं व्रत आदि गर्नु हितकर हुने छ । मीन
मीन ÷ Pisces (दी.दु.थ.झ.ञ.दे.दो.च.ची.) – यो वर्ष मीन राशि हुनेहरूको लागि मिश्रित रहेको छ । अधिकांश पक्षमा उथलपुथल र कतै हानी त कतै नसो“चेको सफलता र लाभ मिल्नसक्ने छ । गर्दै आएको र भोग्दै आएको क्षेत्र, भोगाधिकार तथा पदप्रतिष्ठाबाट हात झिक्न पर्नसक्ने छ भने अप्रत्यासित रूपमा विभिन्न खालका प्रस्तावहरू आउने छन् तर नबुझि स्वीकार गर्नु घातक पनि हुन सक्नेछ । साउन उपरान्त घरपरिवार, दाम्पत्य सम्बन्ध, यात्रा, मित्रसम्बन्ध आदिमा एकाएक असमझदारी बढ्ने तथा कष्ट पर्नसक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । पितृ–मातृ तथा गुरुजन्य मान्यजनको कष्ट–वियोगसम्म व्यहोर्न पर्नसक्ने र शत्रुप्रभाव बढ्ने खगोलीय ग्रहको असर देखिएको छ । कतिपयलाई सन्तति पीडा हुने कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न । पशुचौपाया तथा वाहनादिको पनि क्षति हुने सम्भावना देखिएको छ । पछि पर्दाफास हुने पापकर्म एवम् कुधन आर्जनको चेष्टा नआउला भन्न सकिन्न । विशेष होसविचार तथा संयम नपनाए ईज्जत प्रतिष्ठामै धक्का लाग्नसक्ने छ ख्याल पुर्याउनु पर्ला । स्वकर्मलाई प्रसय दिने कर्मयोगीको लागि भने अपगाल तथा अपयशको बाबजुत भलै संघर्षको बढी अनुभूति किन नहोस अप्रत्यासित उपलब्धि र सफलता नै हुनेछ । जन्ममा सम्बन्धित ग्रह शुभ तथा कारक हुने र सोही बमोजिमको महादशा चल्नेहरूको लागि भने राजमान, अभिष्ट सिद्धि आदि पनि हुनेछ । जन्मकालमा शनि राहु आदि ग्रह प्रतिकूल रहेकाहरूले जागिर तथा कर्मक्षेत्रमा देखिएको अड्चनलाई हटाउन र उपर्युक्त प्रतिकूलतामा कमि ल्याउन शनि, राहु र बृहस्पतिको शान्तिका लागि शनिमहाकाल, भैरव, बगलामुखी स्तोत्रको पाठ र विद्यार्थीहरूले सरस्वती मा“को दर्शन एवम् स्तुती श्रद्धाभक्ति आदि व्रतको पालना गर्नु हितकर रहनेछ । ग्रह शान्तिको लागि आफ्नो कूलधर्म संस्कृति अनुसार सात्त्विक विधिबाट सम्बन्धित विद्वानको मार्गदर्शनमा सम्बन्धित देवदेवीको श्रद्धाभक्ति पूजापाठ तथा दर्शन आदि गर्न सकिन्छ ।
सबै प्रकारका अनिष्ट–ग्रह शान्तिको उपाय गौ–सेवा हो :- जुन गाईको जुरो हुन्छ, गलामा माला हुन्छ, खुर दुईवटा हुन्छन्, सिङ् पिरामिड आकारको हुन्छ, यस्ता गुण सम्पन्न गाईलाई मात्रै वैदिक धर्मले गाईको संज्ञा दिएको छ । यी गाईनै वैदिक गाई हुन् । यिनै गाईलाई वैदिक सनातन धर्मले पूजनीय बताएको छ । यिनै गाईमा तेत्तिसकोटी देवीदेवताको बास हुन्छ । दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ यिनै गाईको मात्रै अमृतसमान हुन्छ नकि जर्सी, होलिस्टेन लगायतका गाईको । स्मरण रहोस बाहिरबाट भित्र्याइएका जर्सी, होलिस्टेन लगायतका गाई वैदिक गाईमा पर्दैनन् र यी गाईको दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ स्वास्थ्यको लागि हानिकारक भएको वैज्ञानिक रुपमै प्रमाणित भइसकेको कुरा हो । जर्सी तथा होलिस्टेनिक लगायतका बाहिरबाट भित्र्याइएका र गाईमा हुनपर्ने जुरो, दुई खुर, माला, पिरामिड आकारको सिङ् नभएका गाईमा पूजनीय गुण पाइदैन । तेत्तिसकोटी देवीदेवताको बास हुने हाम्रो स्थानीय जातिका वैदिक गाईको सेवा गर्दा ग्रह बिग्रदा गरिने विभिन्न देवीदेवता लगायत सबै देवीदेवता एवं ऋषिगणको सेवा हुन्छ, पूजा हुन्छ । त्यसैले नै सबैभन्दा ठूलो ग्रहशान्ति, जानअन्जानमा भएका पापकर्मको प्रायश्चित आदिको उपाय गौ सेवा हो । अतः यी गाईको संरक्षणको लागि विभिन्न तवरबाट यथाशक्य सहयोग आदि भूमिका निर्वाह गरेर यहाँले पनि आफ्नो अनिष्ट ग्रह शान्ति गर्नसक्नु हुन्छ ।
पुनश्चः जन्म समयमा ग्रहहरू अनुकूल रहेकाहरूलाई यहा“ बताइएका फलमा प्रतिकूल फल कम घट्ने र अनुकूल फल बढी घट्ने हुनेछ । त्यस्तै जन्म समयमा प्रतिकूल ग्रह हुनेहरूलाई प्रतिकूल फल बढी घट्ने र अनुकूल फल कम घट्ने हुनेछ । यहाँ समष्टिमा फल बताइएको हो । कति मिल्ने तथा नमिल्ने वा शुभ अशुभ कुन बढी हुने भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको उसको जन्मकालको ग्रहमा भरपर्ने हुन्छ । विशेष अवस्था पर्दा राशिफलको मात्र भर नपरेर विद्वान ज्योतिषीको मार्गदर्शन लिनु बुद्धिमानी हुनेछ । शुभकामनाः Like us on Facebook Like us on facebook